BENZANI MANJE?: USguda usekhiqize asebedlala kwiPSL ngenkulisa yakhe - Impempe
BENZANI MANJE?: USguda usekhiqize asebedlala kwiPSL ngenkulisa yakhe
April 1, 2021 Impempe.com
U-Andile Cele epheka abafana nenkulisa yakhe
U-Andile “Sguda” Cele owake wadlalela i-Orlando Pirates waphoqeka ukuthi asheshe ayeke unobhutshuzwayo ngenxa yokuthinteka edolweni yize kwakusabhekwe kukhulu kuye ngenxa yekhono lakhe elihle.
Le ngwazi yayikade isayiniswwe yiPirates ngo-2001, kanti yaba yingxenye yeqembu likaRoy Barreto elawina iligi ngo-2001/2002. Ukuhlushwa kwakhe ukulimala akumenzanga ukuthi adikibale kunobhutshuzwayo ngemuva kokugaxa amakhokho akhe emgibeni ngo-2010.
U-Andile Cele esadlala kwi-Under 23
“Ngabizwa izinkakha ukuthi ngizokwenza uLevel 1 wezokuqeqesha. Wawubizwa kanjalo ngaleso sikhathi ngashesha ngawuphasa. Umqeqeshi uReggie Shelembe wangibiza ukuthi sizosebenza naye kwiMaritzburg City ngoba wayekholwa ukuthi ngihlale nginephuzu elicacile uma ngikhuluma.
“Ngikhumbula kahle ukuthi ngaleso sikhathi wayexinwe ukugula kodwa kuningi engakufunda kuye yize ayengasaphumi ngisho emotweni. Lelo sonto elilodwa laba wusizo kakhulu kimi,” kusho uCele.
Le ngwazi igcine iqeqesha isikhathi impela kwiMaritzburg City. Yacishe yayinyusela kwiNational First Division (NFD) ngo-2012 kodwa bahluleka emidlalweni yokuhlunga. Nokho uCele ubelokhu enesifiso sokuqala inkulisa ukuze asize abadlali abasebancane abazifelayo ngebhola baseMgungundlovu namaphethelo.
“Ngo-2016 siqalise uhlelo olumbandakanya i-Under 11, Under 13, Under 15 ne-Under 19. Inhloso yethu bekuwukuthi laba badlali bagcine bengena kwiVodacom League (eseyaziwa nge-ABC Motsepe League) uma kwenzeka siqhubeka nokudlala khona. Ngo-2018/2019 sidliwe yize kodwa lokho ngikuthathe njengesibusiso. Inhloso vele bekuwukukhulisa abafana abasebancane ngendlela efanele,” kusho uCele.
“Kubaluleke kakhulu ukuthi bakhule ngokomqondo kuqala laba bafana, bakwazi ukucabanga. Ngisebenzisana nezingwazi ezifana no-Effort Sithole, Siphesihle Ngobese noSibusiso Ngcobo. Nokho savumelana ngokuthi yize bekuyiphupho lami ukusiza abafana abasebancane kodwa ubab’ Hlophe (Bongi Hlophe) kube nguyena usihlalo bese mina ngibe yinhloko yabaqeqeshi.”
U-Andile Cele nabafana benkulisa yakhe
UCele uthe kuyamjabulisa kakhulu ukuthi kukhona abadlali abaphuma esandleni sakhe asebedlala emaqenjini aphezulu ePremier Soccer League (PSL). Ngaphandle kwalokho bakhona nabanye abafana abasebancane akholwa ukuthi bazogcina bezitholele izinkontileka emaqenjini ePSL.
“USiphesihle Ndlovu (wePirates) noPhilani Zulu (weKaizer Chiefs) basuke kwiMaritzburg City baya kwiMaritzburg United. Njengamanje kunomdlali osuka ohlelweni lwethu osanda kuzitholela inkontileka neqembu leMultichoice Diski Challenge (MDC) lePirates. Igama lakhe ngu-Andiswa Sithole.
“KwiMaritzburg United kukhona abadlali abahlanu abasuka kithi engingangabazi ukuthi bazogcina bezitholile izinkontileka kwiMDC. Laba badlali sinqume ukuthi bahlale eMgungundlovu ukuze baqhubeke kahle nesikole. Kubona kukhona uSiphesihle Mlaba, Luyanda Mdunge, Sinamandla Zondi, Kamvalethu Cele (indodana yakhe uCele) noSikhulile Manyoni,” kubeka uCele ezishaya isifuba.
Uthe usondelene kakhulu nomqeqeshi uZipho Dlangalala ngoba kuningi abacebisana ngakho. Ube esebonga Isiqu Group ngokubasiza kakhulu ngesikhathi beqalisa lolu hlelo lwabo lwenkulisa nangokuqhubeka nokunikela kulolu hlelo uma bedinga usizo.
Ebuzwa ukuthi walithola kanjani igama elithi Sguda, uchaze kanje: “Ngokusho kukamama nganginomzimba ngiseyingane, ngakho babengibiza ngoSguqa. Nokho ontanga yethu babehluleka ukuthi Sguqa kunalokho bethi Sguda. Lachuma kanjaloke lelo gama noma sengikhulile sengidlala ibhola.”
Previous Previous post: SHWIII: Yizehluleki ezindala iSafa, yingakho neBafana injena nje
Next Next post: AbeSundowns banifisela impelasonto yePhasika enhle nephephile